Akụkọ - Bọketị anyị na-egwupụta akụ — Na-ekwe nkwa ịdị mma na ịdịte aka
XUZHOU MINYAN Bubata & Mbupụ CO., LTD. emi odude ke kasị ewu ewu na-ewu ígwè ígwè ọrụ obodo Xuzhou, China. Dị ka ọkachamara na-ewu ígwè na akụkụ ahụ mapụtara nke na-eme ekspootu, Minyan nwere ọtụtụ afọ ahịa ahụmahụ maka mwube ígwè na China, anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ na ego maka tupu-ire, ire na mgbe ire ọrụ, na anyị na-mma Export Right site China ọchịchị, anyị enterprise nkà ihe ọmụma bụ “ịtụkwasị obi, iguzosi ike n'ezi ihe, izu okè” - CIP okwu.
Business akporo: anyị ngwaahịa e exported na 80 mba dị iche iche; gunyere Australia, American, England, Poland, Russia, India, Main mba of Africa, Mid-Asia, Southeast Asia etc.
1. Anyị factory tumadi Nlụpụta EXCAVATOR mgbada bọket, Excavaater ụwa epekele, EXCAVATOR SIEVE ịba ụba, obere akpa, Ezigbo RIPPER, EXCAVATOR ngwa ngwa ọrụ, anyị na ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị maka ụdị nile nke excavator ụdị. Dị ka nwamba, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI…
2. Anyị ụlọ ọrụ na-mbupụ bellow ígwè
(1) Ofụri Esịt haịdrọlik akpaaka kreenu, na max-eweli arọ site 8 ton 160 ton.
(2) Ofụri Esịt hydraulic niile teren akpaaka kreenu, na max-eweli arọ site 25 ton 1200 ton.
(3) crawler crane, Max na-eweli igwe site na 35-ton 2000 tọn
(4) Tower crane (kwụ jib; ibughari jib), Max na-eweli site na 4 ruo 50ton. All nlereanya nwere ike na-aghọta anyịnya, n'okpuru-e ji ebu ihe, na-ejegharị ejegharị na mmasị gị ewu mkpa.
3. Okporo ụzọ ala, ibu site na 0.8 ton na 30ton. Gụnyere okpukpu abụọ, ihe na-emegharị ụzọ n'okporo ụzọ, otu ịgbọ agha na ala ụzọ ụgbọ elu, igwe na-agba pneumatic.
4. Asphalt & ihe paver, na-arụ ọrụ obosara si 2.0m na ​​14m.
5. Wheel Loader, ịwụ ikike si 1 ton 12 ton. Wụ olu site na 0,5 cbm ka 6.5cbm
6. Bulldozer si 80hp ruo 520hp
7. Crawler Excavator na wheel excavator ịwụ olu site na 0.044cbm ka 6cbm. Ọrụ ọrụ site na 1.64t ruo 90t
8. Motor Grader site na 102hp ruo 535 hp.
9. Concrete equipment like truck mixer from 6cbm ka 14cbm, ihe mgbapụta si 37m ọganihu ka 56